အိမ် - လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက်ငှားမည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက်ငှားမည်
#အသင့်နေထိုင်ရန်_လုံးချင်းနှစ်ထပ်တိုက်ငှားမည်။ +++++++++++++++++++++++++++++++ 🏡 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းမအနီး 🏡 မဉ္ဇူ (ပါရမီရိပ်သာ)၊ ရပ်ကွက်သန့် 🏡 အကျယ်အဝန်း (50´×50´), 2½_RC. 🏡 1_Master Bedroom, 2_Bedroom. 🏡 ကျွန်းပါကေးခင်း၊ Air con(3)လုံး၊ပြင်ဆင်ပြီး။ 🚩 ကားဂိုထောင်၊ ခြံထဲကားရပ်ရန် အဆင်ပြေသည်။ 💰စျေးနှုန်း_ 9.5Lakhs(ညှိနှိုင်း) 📲📲📲📲📲 >>>>>>>>>>>> 09-752 7575 47, 09-7789 69 226. 09-340 185 131, 09-250 998 522.